Lohataona : Ny nahasarihan’ny arabo ny saiko · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jolay 2019 5:29 GMT
Somary hafahafa ihany ny namaky imailaka iray nanasa ahy hanoratra zavatra momba izay nihaonako voalohany tamin'ny GV. Hafahafa noho ny antony ara-potoana. Vao omaly monja, ary tampoka teo, mbola nikatro-doha aho, niezaka ny nitadidy ny fomba nahafantarako ny fisian'ny GV. Tena tsy vitako, ary mbola tsy vitako!
Raha ny lojikany, mety ho fikarohana nalefalefa fotsiny tao amin'ny Google no nampitontona ahy tao anatin'ny tontolo marolokon'ny GV. Lahatsoratra iray tamin'ny teny Arabo raha tsy diso aho, ary ny zavatra azoko noeritreretina dia hoe “ilaiko ny ho isan'io” ary dia tantara sisa ny tohiny. Tsaroako ny fientanentanako nameno ilay pejy firotsahana, sy ny fahafinaretako nahita ny valinteny nahafapo nalefan'i Mohamed, Toniandahatsoratra.
Nanana hatrany solosaina sy aterineto azoko noraisina aho. Raha ny marina dia miankina betsaka amin'izy ireo ny asako isanandro, fa indray andro, tany am-piandohan'ity taona ity, sambany aho nahatsinjo an-dry zareo. Talohan'izay andro izay, tsy mbola nahatonga saina ahy mihitsy ny tanjaka sy ny tsy fisian'ny fetra ary ny lanjan'ny aterineto.
Tonga tao amin'ny faritra, sy firenena nisy ahy ny rivotry ny fanovàna. Nanangasanga teny am-paravodilanitra ny lohataona iray ho amin'ny fahalalahana, ary nitsangana ny vahoaka. Arakaraky ny nitsanganan'izy ireny avo, nitsangana avo ihany koa ny ratsy, ary arakaraky ny nikiakiahan-dry zareo, nirefodrefotra ihany koa ny baomba. Nonina lavitra ny fireneko aho, ary ny media sy ireo fampahalalambaovao nahazatra no loharanoko hahazoana vaovao momba izay mitranga any. Araka ny fivoaran'ny raharaha, niha-very ny fahatokisana ireny fantsom-pahitalavitra tsirairay ireny rehefa nanomboka vaky masoandro ny taridàlana politika nifehezana ireny media ireny. Ireo gazety an-tsoratra, ny pejy Facebook ary hatramin'ny fantsona YouTube .. tsy vitako intsony ny namantatra hoe iza no hinoana ka dia nanomboka aho nitoditodika nikaroka hafa, loharanom-baovao azo ninoana kokoa. Teo no nahatsinjovako indray ny tanjaky ny fitaovan'ny aterineto, ary nifankahazàrako tamin'ny median'olontsotra.
Niaraka tamin'ilay nahazoako fahitàna vaovao, nahatsiaro tena ho toa an'i Neo ilay ao anatin'ny The Matrix aho! ary satria aho mbola vaovao tamin'io tontolo io, dia zendana hatrany, miaraka amin'ireo masoko mivontirika. Toy ny hoe nisy boky iray vaovao nosokafana momba ny fiainako, boky iray hanova tanteraka ny fiainako, maroloko, mamiratra sy marina…lohataona iray…ny lohataona ahy irery…noho ny Arabo.
16 ora izayAzia Atsinanana